प्रधानमन्त्री ओलीसँग कस-कसका गोप्य टेप र भिडियो छन् ? - Sutra News
संगीतको क्षेत्रमा उहाँको योगदान स्मरणीय छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना नभएको पुष्टि
सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याको समाधान समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट टेप राजनीति सुरु भएका कारणले कतिपय आफ्ना नेताले दल छाडेको संकेत गरेका छन्।
एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा उनले टेप र भिडिओ रेकर्डका आधारमा नेताका चरित्रलाई दाउमा राखेर आफूतिर तान्न ओली सक्रिय रहेको उनको आरोपको सार हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारी सोही काममा सक्रिय रहेको उनको बुझाई पनि छ।
के प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेताहरूका विभिन्न प्रकारका टेप र भिडियो हुन सक्छन्? स्रोतले भन्यो,‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्ता धेरै प्रकारका गुनासा र प्रमाण पुगेका कारणले नहुने भन्ने हुँदैन।’
हुन पनि यस्ता केही उदाहरण भेटिएका छन्। जसका कारण केही राजनीतिक व्यक्तिले पद र जिम्मेवारी गुमाउनु परेको थियो। बालुवाटारमा हाइप्रोफाइल व्यक्तिका अफेयरदेखि विभिन्न प्रकरणमा गरेका बार्गेनिङसम्मका भिडियो हुन सक्छन्।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र रोशनी शाही प्रकरणको रेकर्डेड भिडियो पनि बालुवाटारबाट नै बाहिरिएको थियो। जसका कारण महराको सभामुख पदमात्र गएन उनी केही समय पूर्पक्षका लागि थुनामा समेत बस्नु परेको थियो।
‘एमसीसी टेबल नगर्दाको राजनीतिक परिणामका आधारमा महराको त्यो हविगत भएको थियो। अग्नी सापकोटा पनि एमसीसी टेबल गराउने सर्तका आधारमा नै सदन छिरेका हुन्’, स्रोतले भन्यो,‘यस्ता अन्य प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिका भिडियो पनि हुन्छन्।’
बालुवाटारको बालुवा पेल्दा पेल्दै थाकेपछि प्रचण्डको नयाँ ‘जनयुद्ध’ गर्ने घोषणा
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू माथाहतमा राखेपछि यस्ता सूचनाका हतियार संकलनका लागि उनको सचिवालय सक्रिय रहेको बताइन्छ।
बालुवाटारले राखेको अडियो र भिडियोको अर्को रेकर्डले राजनीतिक प्रहार गरेका नेता हुन् दिर्घ सोडारी। सोडारीको अफेयर रहेकी महिलाको उजुरीका आधारमा ति प्रमाण बालुवाटारमा पुगेका थिए। जुन प्रकरणका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको पदबाट सोडारीले हात धुनु परेको थियो।
सोडारी अहिले नेकपा एमालेभित्रको विवादमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा उभिएका छन्। ‘आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउनका लागि बालुवाटारले यस्ता हतियार प्रशस्त रुपमा राखेका छन्’, स्रोतले भन्यो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका पनि कतिपय नेताहरूको विषयमा खिचिएका बार्गेनिङलगायतका भिडियो बालुवाटारमा सुरक्षित रहेको बताइन्छ। यसको एउटा उदाहरण भनेको कमानसिंह लामा प्रकरणमा नारायणकाजी श्रेष्ठबारे सुरक्षित रहेको भिडयो पनि हो।
‘विभिन्न समस्या र सम्झौतका विषयमा नीतिगत तहमा यसरी कुरा हुने गरेका छन्। नारायणकाजी प्रकरण पनि त्यसैको एउटा उदाहरण थियो र अहम् मौकामा बालुवाटारले त्यसलाई प्रयोग गरिदियो’, स्रोतले भन्यो,‘अन्यका पनि यस्ता भिडियोलाई सुरक्षित राखिएको छ। जसले मौकामा फाइदा दिन्छ प्रयोग र प्रायोजित हिसाबले बाहिर निकाल्न सकिन्छ।’
शक्ति र सत्ताले यसरी गोप्य रुपमा भिडियोको प्रयोगले कानुनी कारबाही मात्र होइन, राजनीतिक रुपमा हल्ला फिजाएर विरोधीलाई कमजोर समेत बनाउन सक्ने प्रशस्त आधार हुन्छन्। कुनै बेला नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई प्रधानमन्त्री हुँदा कारबाही गर्ने प्रचण्डको रणनीति पनि एउटा भिडियोका कारणले नै समाप्त भएको थियो।
शक्तिखोरमा तत्कालिन जनमुक्ति सेनालाई प्रशिक्षण दिँदा आफ्ना सेना कम रहेको र राज्यसँग रकम लिएर राजनीति गरिरहेको भन्ने प्रचण्डको भनाईको पर्दाफास भएपछि नैतिक रुपमा सेनालाई चलाउन कठिन भएको थियो। ‘यस्तै अहम् मौकामा प्रयोग गरिन्छ’, स्रोतले भन्यो,‘त्यसपछि प्रचण्डको राजनीतिक ओरालो यात्रा सुरु भएको देखिएकै छ त!’
प्रकाशित :बैशाख ४, २०७८ शनिवार - ०८:२५:४२
# गोप्य टेप र भिडियो